အမျိုးသားဆိုင်ရာ Archives - Page4of 54 - BuzzFeed Myanmar
အိမ်​​ထောင်​သည်​ တစ်​​ယောက်​ အ​နေနဲ့ ​ခေတ်​နဲ့အညီ အများ နည်းတူ Facebook သုံးမယ်​ဆိုရင်​ . .
အိမ်​​ထောင်​သည်​ တစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ ​ခေတ်​နဲ့အညီ အများနည်းတူ Facebookသုံးမယ်​ဆိုရင်​ . .ကိုယ်​လိုင်းသုံး​နေချိန်​ လင်နဲ့​မယားအကြား လျှို့ဝှက်​စရာမလိုပဲ သိက္ခာရှိရှိ အသန့်​ရှင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်​ရင်​ အ​ကောင်းဆုံးပါ. .​ခေတ်​ရဲ့ သားပျိုသမီးပျိုရှိတဲ့သူ​တွေအ​နေနဲ့ ကိုယ့်​ရင်​​သွေး​လေး​တွေOnline​ပေါ်မှာ လမ်းမှားမ​လိုက်​မိ​အောင်​လမ်းပြ​ပေးဖို့ ကာကွယ်​​ပေးဖို့ကိုယ်​က Facebookကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်​ထား သင့်​တယ်​လို့ မြင်​မိပါတယ်​. .
ယောက်ျား က မိန်းမ မရှုပ်ဘူး လောင်းကစားမလုပ်ဘူး အရက်မသောက်ဘူး ဒါပေမယ့် ကွာရှင်းချင်ပါတယ်…
သူမယောကျာ်းဟာ မိန်းမ မရှူပ်ဘူး… လောင်းကစားမလုပ်ဘူး… အရက်မသောက်ဘူး… ဒါပေမယ့် ကွာရှင်းချင်ပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂိမ်းအရမ်းဆော့လို့ပါတဲ့… အဲ့တာ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ကွာလို့ရပါသလဲလို့ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်က မေးထားတယ်…
လိင်ကိစ္စ နဲ့ပက်သက်ပြီး အမျိုးသမီး ၅ဦး မှာ ၄ဦး က ပြုလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးများ
လူတိုင်းမှာ ချစ်တင်းနှောတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးကိုယ်စီရှိကြပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့လောကနဲ့ မတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက်သာဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် မပြုလုပ်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။အမျိုးသားတွေသာမက အမျိုးသမီးများမှာလည်း ချစ်တင်းနှောတာနဲ့ပက်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၅ ဦးမှာ ၄ ဦးလောက် စိတ်ကူးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့….
အိမ်ထောင် တစ်ခုတည်မြဲခြင်းဆိုသည်မှာ နှစ်ဦးစလုံးကြိုးစားရင် လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောာက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်သူဘ၀ကလိုမျိုး ဂရုစိုက်မှုတွေ လျော့ပါးလာနိုင်တာကြောင့် အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ ရှားပါးကြပြီး စုံတွဲတိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေ၊အဆင်မပြေမှုတွေ၊ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းတွေနဲ့ ဥပေက္ခာပြုတတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေကို အချိန်ယူပြီးပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် သိပ်မခက်ခဲတဲ့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်ပါ။
အိမ်ထောင် သက်တမ်းသုံးနှစ်ရှိပြီးကာမှ ကွာရှင်းကာ တစ်အိမ်တည်း အတူနေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲ?
သူက ကျနော်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက်ပါ… ကျနော်တို့ ချစ်သူဘ၀ ၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီး အခု အိမ်ထောင်သက်တမ်းကလဲ ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ…ပြသနာ တစ်ခုပါဘဲ… သူနဲ့ကွာရှင်းပြီးတော့ သူနေရာသစ်မရမချင်း ကျနော်တို့ တစ်အိမ်တည်း အတူတူနေရဦးမှာပါ…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ရယ်ချင်မိတယ်… ချစ်သူဘ၀တုန်းက ကျနော်တို့ဟာ အရမ်းကို ရိုးသားလွန်းတယ်… လက်တွဲတာ ပွေ့ဖက်တာတွေ ထားပါဦးတော့… လက်မထပ်ခင် အတူတူနေဖို့ဆိုတာ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားရဲဘူး… အခုကျတော့ ကွာရှင်းလိုက်ရပြီ… တော်တော်လေးကို ခေတ်မီနေပါပြီလေ…
သူတစ်ပါး အိမ်ထောင် ကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ ခံစားရမယ့် အရာ(၅)မျိုး
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူ တွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
မိခင် အိမ်ရှင်မ များသို့ လေးစား သော ဂါရဝ နှင့်အတူ အမြင်မှားများပျောက်ပါစေလို့
ကျနော့်ဇနီးမှာ အလုပ်အကိုင် မရှိဘူးလေ
အာရောဂျ ပရမာ လာဘာ ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်တစ်ပါးပါ တဲ့
ကျန်းမာခြင်းဆိုတာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပါတယ် ။
စိတ်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။
ကလေးမဆော့တဲ့ ဂေါ်လီ(အသားတို့ စူးစမ်းလိုကြတဲ့ ဂေါ်လီထည့်ခြင်းဆိုတာ….)
ညနေစောင်းပြီဖြစ်သဖြင့် ဒေါက်တာနှင်းငွေနှင့် ဒေါက်တာနိုင်လင်းတို့နှစ်ယောက် ဆေးရုံမှပြန်ကာ ဒေါက်တာနှင်းငွေ၏ဆေးခန်းအနီးရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွင်ထိုင်ကာ ရောက်တတ်ရာရာပြောနေခိုက် ဒေါက်တာနိုင်လင်းက” အကိုရေ ကျွန်တော့ဆီမနေ့က လူနာ တစ်ယောက်လာတယ်ဗျ။ မရိုသေ့စကား သူ့ရဲ့ ဟိုဟာကို ဂေါ်လီ မြှုပ်ချင်လို့တဲ့။ အဲဒါ ကျွန်တော်လည်း မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ငြင်းလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ ဒီလိုမျိုးထည့်တဲ့လူတွေလဲ ရှိကြတယ်နော်။”